Hawaiian Airlines inotamira kuTom Bradley International Terminal kuLaX
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Hawaiian Airlines inotamira kuTom Bradley International Terminal kuLaX
Vashanyi vari kuenda kuHawaii kubva kuLAX vanofanirwa kuseta padhuze maminetsi gumi nemashanu kuti vaende kubva kune yechitatu-pasi-yekuongorora-mukati makadhi mukati meTom Bradley International Terminal kuenda kuWest Gates nenzira yepasi pevhu.
Musi waGumiguru 12, Hawaiian Airlines anotama kubva kuTerminal 5 uye otanga kugamuchira vafambi kuTerminal B kuLos Angeles International Airport.
Hawaiian Airlines 'vashanyi vanoenda nekubva kuHawaii kuburikidza neLaX vachanakidzwa nenzvimbo yemazuva ano uye yakanaka.
Hawaiian inopa kurwa nhanhatu kwezuva nezuva pakati peLaX neHawaiian Islands, kusanganisira katatu-kwezuva nezuva basa kuHonolulu, uye kamwe-zuva rebasa kuna Kahului paMaui, Kona paChitsuwa cheHawaii, uye Lihue paKauai.
Hawaiian Airlines ichave neimba nyowani kuLos Angeles International Airport (LAX) inoshanda neChipiri, Gumiguru 12, painotama kubva kuTerminal 5 uye yotanga kugamuchira vafambi paTerminal B, inozivikanwawo seTom Bradley International Terminal.
Vaenzi veHawaii vanoenda nekudzoka kubva kuHawaii kuburikidza neLaX vachanakidzwa nenzvimbo yemazuva ano uye yakagadzikana ine zvimwe zvinowanikwapo, kuwedzerwa kwekudyira uye zvekutenga sarudzo uye rakakura nzvimbo regedhi.
Hawaiian Airlines inopa kukakavara kwemazuva matanhatu pakati LAX uye zvitsuwa zveHawaii, zvinosanganisira katatu-zuva nezuva basa kuHonolulu, uye kamwe-zuva rega rega kuita Kahului paMaui, Kona paChitsuwa cheHawaii, uye Lihue paKauai.
"Tinotenda rutsigiro rweLos Angeles World Airports mukutamisirwa kwedu kuTerminal B, zvinozopa vashanyi vedu ruzivo rwepamusoro kunyangwe vari kutanga zororo ravo kuHawaii kana kudzoka kumba," akadaro Jeff Helfrick, mutevedzeri wemutungamiriri wezvekushanda kwendege ku Hawaiian Airlines.
"Kana Hawaiian Airlines yapinda mumusha wayo mutsva kuWest Gates paTom Bradley International Terminal, vafambi vachanakidzwa nechimwe chezvivakwa zvepamhepo zvemberi uye zvehunyanzvi pasi rose," akadaro Justin Erbacci, CEO weLos Angeles World Airports. "LAX yakava nzvimbo yekutanga yeHawaiian Airlines kuUS makore anopfuura makumi matatu apfuura, uye tinotarisira kuenderera mberi nehukama hwedu hurefu hunobatanidza Hawaii neSouthern California. ”
Vaenzi vari kuenda kuHawaii kubva LAX inofanirwa kuisa parutivi ingangoita maminetsi gumi nemashanu kuti uyende kubva kune yechitatu-pasi yekuongorora-mukati macomputer mukati meTom Bradley International Terminal kuenda kuWest Gates nenzira yepasi pevhu. Vaenzi veHawaii vanosvika kuLax kubva kuHawaii vachatora mabhegi akatariswa padanho repasi pekutakura nhumbi. Vafambi vanogona zvakare kubatana pakati peWest Gates neTerminals 15-4 kuburikidza nekoridara isina kuchena pasina chikonzero chekubvisa kumwe kuchengetedzeka.
Roberta Pittman anoti:
Zvita 17, 2021 pa07: 06
Iyo itsva terminal inowedzera ingangoita mamaira kure kure kubva pamugero kuenda kugedhi. Nenzira mbiri chete dzinofamba dzaisashanda nguva dzose. Ini handisi kuzobhururuka Hawaiian kubva kuLAX zvachose.